Tim Cook na mberede gara ọtụtụ Apple Stores na France | Esi m mac
Dị ka akụkọ dị iche iche metụtara Apple, Onye isi ụlọ ọrụ ahụ gara France na ngwụsị izu gara aga wee soro ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ahịa kpaa nkata maka ihe ịtụnanya. Tim Cook kpebiri ịga ụlọ ahịa Marseille nke mepere ọha na eze na Mee gara aga na ụlọ ahịa Terrasses du Port, na mechara gaa ụlọ ahịa Apple ndị ọzọ na mba ahụ. Ọtụtụ ekweghị na ihe ha na-atụgharị n’uche, isi Apple n’ebe dị mita ole na ole, dị ka a ga-asị na ọ bụ onye ọbịa ọzọ n’ụlọ ahịa Apple.
E zigara akụkọ ahụ ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta na-akọ oge ahụ. Cook n'onwe ya were ndị ọrụ were ọtụtụ foto ma kesara ya na Twitter na ozi a:
Obi dị m ụtọ ịlaghachi France iji hụ ndị otu anyị nwere nkà na Marseille.
Na mgbakwunye, Tim Cook nwere ohere ikarịta ụka were awa abụọ Jean Claude Luong, na-elekọtazi ụlọ ọrụ mmelite maka ahịa ọtụtụ nke ụlọ akụ Ebe E Si Nweta Agricole. Ha kwurịtara banyere mmalite nke Apple Ṅaa na mmejuputa ya.
Mgbe nleta ahụ, a chụrụ ya n'ọrụ site n'aka ndị ọrụ na ndị ahịa. Mgbe ọ kwụsịrị na Marseille, ọ gafere na akara ngosi Apple Store Carousel nke Louvre na Paris.
Amabeghị ma ọ bụrụ na nleta Cook na France bụ nleta onwe onye ma ọ bụ nleta azụmahịa sitere na ụlọ ọrụ ahụ wee jiri izu ụka ahụ gaa nlegharị anya wee mụta banyere isi ahịa Apple na France.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Ṅaa » Tim Cook mere njem nleta na ọtụtụ Apple Stores na France
Nweta Adobe Photoshop Elements 30% kwụsịrị maka obere oge